Yohane 13 NA-TWI - Yesu hohoro n’asuafo nan ase - Ade - Bible Gateway
Yohane 12Yohane 14
Yohane 13 Nkwa Asem (NA-TWI)
13 Ade rebɛkye ama Twam Afahyɛ no adu no, Yesu hui sɛ afei bere aso sɛ ofi wiase kɔ n’agya nkyɛn. Yesu yɛ obi a na ɔdɔ n’akyidifo, na ɔdɔɔ wɔn kosii sɛ owui. 2 Bere a na Yesu ne n’asuafo te adidii no, ɔbonsam kɔhyɛɛ Yuda Iskariot a ɔyɛ Simon ba no mu sɛ onyi Yesu mma. 3 Yesu nim sɛ n’agya de tumi nyinaa ahyɛ ne nsa, na ofi Onyankopɔn nkyɛn na ɔbae, na ɔresan akɔ ne nkyɛn. 4 Yesu sɔre fii didipon no ho, yii n’atade nguguso guu hɔ, de mpopaho twaa n’asen. 5 Ohwiee nsu guu kankyee bi mu na ofitii ase hohoroo asuafo no nan ase de mpopaho no popae. 6 Bere a Yesu duu Simon Petro so no, Petro bisaa no se, “Awurade, worebɛhohoro me nan ase anaa?”